Endri-javatra izay mampiavaka ny Gmail ▷ ➡️ mpanaraka ▷ arangi️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 734
Ireo fanavaozana ao amin'ity farany Hafiriana no nanompoany ny mailaka Google, dia ny fametrahana ny Gmail. Ny mailaka Gmail no be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao ary manana mpampiasa 600 tapitrisa mifandraika amin'izany.
Gmail amin'izao fotoana izao Mihabetsaka isan'andro izy io, ary izany dia nahatonga an'i Google hanavao ny interface Gmail ho amin'ny sehatra vaovao, toy ny manampy fiasa vaovao miaraka amin'ireo gadget sasany izay kinova vaovao.
Na eo aza ny fisian'ny hafa Sehatra manao serivisy mailaka toa an'i Outlook, Microsoft, Yahoo Mail ary mitohy izy ireo ankehitriny, na izany aza tsy mitovy amin'ny fanomezana vahaolana fitehirizana, karoka ary fandaminana toy ny ataon'ny Gmail.
Hitandrina izany ny tombony dia manana gmail ary ahoana ny fahombiazany, Google amin'ny alàlan'ny fanomezana ireo mpampiasa dia tsy maintsy mivarotra dokam-barotra, mampiditra vaovao araka ny hafatra ao amin'ny mailaka alefany, mametraka fampiroboroboana, hafatra avy amin'ireo mpahazo tombontsoa ho an'ny orinasa hijerena.
Misaotra ny fivoarana izay efa ananan'i Gmail tao anatin'ireo vanim-potoana ireo, atolotray anao, ny
Endri-javatra mampiavaka an'i Gmail,
Fandraisana amin'ny fanasana: Ny mpampiasa vaovao rehetra dia afaka mandefa fanasana amin'ny vondron'olona.
Fitehirizana 2.5 GB: Raha tsy maintsy mamafa ireo mailaka hafa ny sehatra mailaka hafa mba hanomezana toerana malalaka, manome anao fahaiza-mitahiry i Gmail.
fikarohana: Ahafahanao mahita teny fanalahidy haingana sy mora hahitana ny mailaka irina.
Fanamboarana sary: Safidy izay ataon'i Gmail amin'ny maha mpampiasa anao dia azonao atao ny mametraka sary ambadika any amin'ny mailaka sy mampanjifa azy.
Kaonty natokana; Azonao atao ny mahazo fidirana avy amin'ny fitoeran-tsakafo manokana, raha toa ka tontolon'ny orinasa dia misy fanondroana omena olona hafa izay manoratra amin'ny anaran'ny kaonty orinasa.
Fitaovana Drive sy Docs: Azonao atao ny manao asa antontan-taratasy izay voatahiry ao amin'ny Google Docs.
iOS na Android: Azonao atao ny mampiasa Gmail amin'ny findainao ho toy ny kinova amin'ny birao.
Labs: Izy io dia fiasa iray ahafahanao mampiato ny fandefasana ao anatin'ny 30 segondra aorian'ny fotoana nandaozan'ny fandefasana ny boaty. Labs dia manana lisitry ny safidy ahafahanao manamboatra ny interface mail.
Hafatra Hangouts, GTalk: manolotra anao chat izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa ny hafany amin'ny olona mifandray aminy ary manao antso an-tsary.
Alamino ny mailaka: Gmail dia mamela ny mpampiasa hanasokajy ny mailak'izy ireo amin'ny fomba milamina, hampiasa ny sokajy tiany kokoa, toy ny Main, Promotions ary Social na manampy bebe kokoa amin'izy ireo arak'izay itiavany azy.
Mamela anao hampanginana ny mailaky ny vondrona hisorohana ny fanelingelenana: Ahafahanao manavao hafatra mandritra ny resaka izay tsy hahazoanao fampandrenesana mivantana.
Aza atao afa-tsy kofehy amin'ny mailaka.
Misokatra el hafatra.
Tsindrio ny Safidy "Misoka".
Manana tontonana ny Gmail Preview: Mba hahafahana mamela an'ity safidy ity dia tsy maintsy ampiasanao ny Labs amin'ny alàlan'ny fanindriana ny fikirakirana Labs ary zahao ny safidy ahafahana mitahiry ireo fanovana.
Ahoana no hahombiazako amin'ny Pinterest?